नेपाल सेवा लघुवित्तको आइपीओ आउंदै, कहाँ जाने भर्न?
ARCHIVE, MARKET WATCH » नेपाल सेवा लघुवित्तको आइपीओ आउंदै, कहाँ जाने भर्न?
काठमाडौँ - वैशाख १२ गतेदेखि नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आइपीओ बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ दरको १ लाख ८० हजार कित्ता आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । यसमध्ये ३ हजार ६०० (२%) कित्ता कम्पनीका कर्मचारी र ९ हजार (५%) कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर बाँकी १ लाख ६७ हजार कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागिएको हो ।
यो आइपीओमा वैशाख १६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यस अवधिमा आवश्यक मात्रामा आवेदन नपरेमा भने जेठ १० गतेसम्म भर्न सकिने व्यवस्था छ । यसमा न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम ९ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
लगानीकर्ताले आस्वा सदस्य सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले ३०% सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न लागेको हो । ७०% हिस्सा भने संस्थापकसँगै रहनेछ । यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनएमबि क्यापिटलले गर्नेछ । नेपाल सेवाकोे केन्द्रीय कार्यालय सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा छ ।